Sanadkii 2aad ee ka soo wareegay Maalintii taangiga Xabashidu galay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho oo laga Xusey Magaalada Johannesburg.
Maanta (Axad) oo ay taariikhdu tahay 28 Dec 2008 waxaa isugu yimid hoolka Suliman Nanna eek u yaala magaalada Johannesburg boqolaal Soomaali ah oo u baroor diiqayay balaayo guurayadii 2aad ee kasoo wareegtay maalintii taangiga Xabashidu galay caasimada dalka ee Muqdisho.
Seminar kan oo loogu magic daray "QABSASHADII XAMAR IYO QALALAASAHA GEESKA AFRIKA" oo ku beegnaa 28 Dec oo ah maalintii Xamar ay qabsadeen Ethiopianku ayaa waxaa isugu yimid wufuud ka kala yimid gobolada Gauteng, Eastern Cape, North West iyo Western Cape.
Munaasabadan oo ay soo diyaarisay Jaaliyada Soomaalida Koonfur Afrika (Somali Association of South Africa "SASA) ayaa waxaa loo soo agaasimay si heersare iyada oo ay culimo iyo aqoonyahamiin kale ka jeediyeen madasha taariikhihii ay isla soo mareen labadan qawmiyadood ee Xabashida iyo Soomaalidu.
Haddiiba maskaxdeena lagu laxaamaday taariikhda ah September 11 oo Maraykanka la weeraray miyayna munaasab ahayn inaynu inaguna taariikhaheena waynayno oo kuwa mudan oohinta aan tiiraanyoone, ayaa lagu furay shirka.
Nadwada waxaa aayado Quraan ah ku furay Sh Cabdi Jabaar Cali Aadan waxaana si rasmi ah u furay Maxamed Cabdi Diiriye (Qooqaani) Nadwada oo dhan waxaa daadihinayay Mudane Cabdi raxmaan Raabi.
Madasha Shirka waxaa lagu soo bandhigay daraasado lagu sameeyay mawduucyadan kala ah:
Goorma ayaa layna qabsaday ma 1895tii mise 2006 oo uu jeediyay Sh Maxamed Amiin Jawhar
Waa maxay asalka colaada u dhaxaysa Soomaali iyo Xabashi, Gacmo shisheeyase ma ku jiraan colaada oo uu jeediyay Sh Axmed Dheere
Imisa Dagaal ayay labadan qawmiyadood dhex maray oo uu soo jeediyay Cali Siciid Najjaar
Maxaad ka Taqaanaa Ethiopia mujtamac ahaan iyo Waa maxay tabaha cusub ee ay la maagan tahay Soomaalida oo uu soo jeediyay Axmed Dawlo.
Haddaba waxaan si yar oo kooban uga hadlaynaa mawduucyadan iyo sidii loo soo dhiraandhiriyay.
Sh Maxamed Amiin Jawhar;
Dalka Soomaaliya waxaa la qabsaday oo si isdaba joog ah kolba qayb loo goosanayay tan iyo maalintii Harar ay qabsadeen Xabashidu iyagoo taageero ka helaya dawladaha xooga waawayn ee Masiixiga ah. Maalintaas iyada ah Menelik wuxuu fuulay minaarada Masaajidkii ugu waynaa Harar wuxuuna ka soo kaajay meesha uu mu'adinku ka aadaamo.
Wuxuu Menelik waraaq mahad celin ah u diray dawladihii reer Yurub oo uu yidhi "wixii manta ka danbeeya wuu dhammaaday taliskii Islaamka ee gobolkani. Menelik wuxuu goostay qaybtii u horaysay dhulka Soomaalida markaas iyada ah.
Xayle Salaase wuxuu isna goostay dhulkii Reserve Area oo uu Ingiriisku abaal gud ugu siiyay maadaama oo uu Xayle Salaase Ingiriiska saaciday xilligii uu Talyaaniga a dagaalamayay dagaalka 2aad ee Aduunka.
Mengistu wuxuu reer walba oo Soomaali ah u sameeyay 3 xaraf oo "S" ka bilaabata. Barnaamijkaasi wuxuu ahaa midkii u googol xaadhay burburkii Soomaaliya iyo kala aamin baxa ilaa maanta taagan ee gallaaftay qaranimadii Soomaaliya. Mengistu wuxuu yidhi khudbadii u danbaysay ee uu jeediyo isagoo madaxwayne ah "wxaaa la igu xasuusan doonaa inaan baabi'iyay cadowgii Ethiopia oo Soomaali ahaa".
Mles Zenawi isugu wuxuu sameeyay taariikh uusan samaynin madaxwayne hore oo Ethiopian ah wuxuuna taangiga Xabashi geeyay caasimada Soomaaliya. Wuxuu Sheekhu ku nuux-nuuxsaday
Cali Siciid Najjaar
Wuxuu doodiisa ku saleeyay daraasad uu ku sameeyay dagaaladii kala casri duwanaa ee dhex maray Xabashida iyo Soomaalida. Cali wuxuu si aad u hufan u kala dhig-dhigay halgamadii kala duwanaa ee dhexmaray isaga oo ka soo bilaabay halgankii Axmed Guray.
Cali Siciid wuxuu sheegay in 9 halgan oo waawayni dhex mareen Soomaalida iyo Xabashida. Halgamadani qaarba wakhti ayuu socday waxaana ka mid ah:
Halgankii Axmed Guray 1504-10545
Halgankii Daraawiishta 1895-1921
Halgankii Nasrullaahi (Geeshka) 1963-1964
Halgankii Ogaden War 1977-1978
Halgankii WSLF (Waa dagaalkii Jabhaddii WSLF 1978-1984)
Halgankii Al Itixaad ee Soomaali Galbeed 1992-2008
Halganka ONLF 1994-2008
Halgankii Gedo 1996-1997
Halganka Maxaakiimta 2006-2008
Cali wuxuu si cilmiyaysan u sheegay in Soomaalida iyo Xabashidu ay waligood is layn jireen oo aan waligeed Soomaali laga adkaanin in Xabashi ay u gargaaraan dalal shisheeye mooyaane. Waxaa xusid mudan inuu Cali is barbar dhigay halgankii Axmed Guray iyo midkii Maxaakimta oo uu sheegay xilligii Imaam Axmed Guray uu soo baxay xaallada Soomaaliya waxay u ekayd midii dalka ka jirtay sanaka 2006 iyadoo qaadhicu Dhariiqa iyo mooryaantu xukumeen.
Sh Axmed Dheere
Sh Axmed wuxuu si wayn cilmi ugu fadhiisay in colaada gobolka Geeska Afrika ay ku fadhiso 4 shay.
Sheekhu wuxuu diirada saaray in Ethiopia waligeed ay maamuli jireen niman baadiriyaal ah oo diinta Masiixiga ku dhagan. Halka Soomaalidu ay tahay mujtamac diinta Muslimka ku dhagan. Is nacaybka u dhaxeeya Soomaalida iyo Xabashida wuxuu Sh Axmed tusaale u soo qaatay ninka Xabashiga ee mukhaayad nin Soomaali ahi leeyahay shaah ka dalbaday ee ku yidhi "Shaaha ha igaga cadaynin caanaha Geella oo Masiixiyiintu aaminsan yihiin inuu nijaas yahay" kadibna ninkii Soomaaliga markii uu ka gaday shaahii ee uu lacagtii ka qaatay uu bakeerigii tuuray.
Sheekhu wuxuu kaloo ka hadlay gacmaha shisheeye ee ku jira colaada isaga oo ka soo bilaabay taageeradii Portugese ku siiyay Xabashida xilligii Imaan Guray. Taageeradii Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Maraykanka, Ruushka, Kuuba iyo waliba kuwa kale ee masiixiga ahi ay sida joogtada u siiyaan Xabashida.
Wuxuu Sheekhu soo bandhigay khariirado fara badan oo qaarkood cadaynayo in Soomaaliya la doonayo in Xabashida lagu darayo.
Axmed wuxuu diirada ku saaray Ethiopia iyo taariikhdeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda iyo sida ay u fikirto. Wuxuu yidhi magacan Xabashi waxaa la yidhaahdaa oo kaliya labada qawmiyadood ee Axmaarada iyo Tigreega. Ethiopia inteeda kale waa dad sida Soomaalida la qabsaday oo qasab lagu haysto.
Axmed daraasad ahaan u soo bandhigay in Soomaalidu awoodo inay Xabshida iska celiso laakiin Kaniisada caalamiga ahi ay saacidayso Xabashida. Wuxuu sheegay in lacagta Ethiopia dakhliga u ah oo dhan marka laga reebo 30% ay bixiyaan Maraykanka iyo Midowga Yurub oo u siiya Ethiopianka deeq ahaan iyo dayn ahaan. Sidaas oo ay tahay buu yidhi lacagta ay Soomaalida aan dawlada lahayni isu dirto waxay ka badan tahay dakhliga Ethiopia oo dhan. Wuxuu yidhi Ethiopia 4 jeer ayay ka dad badan tahay Soomaaliya waana isku dakhli ama Soomaalida ayaa ka badan.
Wuxuu yidhi Soomaaliya oo aan dawlad lahayn xataa "GEELLU wuxuu haystaa Mobile phone" halka ay ciidamada Xabashida ee Muqdisho yimid markaas ugu horaysay qaarkood.
Inkasta oo aan maqaalkan lagu soo koobi karin Nadwadan oo socotay 5 saacadood hadana waxaa la odhan karaa dadkii Soomaalida ahaa ee isugu yimid goobta waxay la mabsuudheen macluumaadka la soo gudbiyay oo dhab ahaan aad u qoto dheeraa.
Waxaa kale oo goobta lagu daawaday cajalado video ah oo ku saabsan taariikhda Soomaalida iyo dagaaladii dhex maray iyaga iyo Xabashida.
Munaasabadii ayaa sidaas ku dhamaatay iyada oo Ilaahay laga baryay in maanta maalinteeda kale 28 Dec 2009 uu insha Allaah xor ahaan doono dalka Soomaaliyeed ee Xabashi haysato oo dhan.
Faafin: Somalitalk.com | Dec 28, 2008